घाटी र चाक काट्ने व्यापारी
अचम्म मान्नु पर्दैन । कुरा नेपालका ग्यास बिक्रेताको हो ।
ट्वाल्ल परेका आँखा र फुट्न लागेका बम जस्ता गालाधारी एकजना मान्छेको तस्विर राखेर समाचारले छापे यी यही हो ग्यास बमको नाइके । तर बुझ्दै जादा धेरै यस्ता गिरोहहरु सक्रिय रहेछन जो उपभोक्तालाई ग्यासको सिलिन्डर हैन, कुन बेला पड्कने हो थाहै नहुने गरि ग्यास बम पो बेचिरहेका रहेछन ।
सुनसरीको खनारमा धादिंग स्थित सुगम ग्यासका शिवप्रसाद घिमिरेले १५ हजार ३ सय १४ थान चोरीका सिलिन्डर पिँध र घाँटी काटेर तयारी अवस्थामा राखेका थिए । सुरक्षा का दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील यस्ता सिलिन्डर पक्राउ परेको यतिका दिन बितिसक्दा पनि कार्यवाही गर्ने कुरा भने एक पाइला अघि सर्न नसकेको देख्दा उदेक लागेर आएको छ मलाइ । हैन नेपालमा सधै किन यस्तो दण्डहिनता ? अझ माउवादिको शरणमा हार गुहार गर्दै पुगेका छन रे । हेरम न के हुदो रैछ ।
सिलिन्डरमा अर्को कम्पनीको लोगो छापिएका भाग घाटी र चाक काटेर आफ्नो कम्पनिको लोगो राखी बेच्ने यस्ता काला बजारीलाई अब के गर्ने होला ?
जनताको जिउधन्माथि खेलवाड गर्ने यस्ता व्यापारीलाई के गरेर कारवाही गर्ने त भनेर सरकार अन्योलमा परेको हो भने, दवाव पर्ने बित्तिकै पड्कन सक्ने प्रकृतिका, पिध काटेर सुगम ग्यास लेखिएका सिलिन्डरहरुसंगै उनलाई पनि बिचमा राखेर पाइलै पिछे खाल्डा खुल्ड़ी भएको दुर्गम गाउतिर पठाउने राय दिन चाहन्छु ।
घुँयत्रो : अर्थ, ग्यास, समाज
मेरो राय कसैलाइ चित्त बुजेन की के हो ?